Madasha Xisbiyada Qaran oo ka hor-timid guddiyada doorashada kadib markii ‘lagu soo daray’ xubno… | Warkii.com
Home warkii Madasha Xisbiyada Qaran oo ka hor-timid guddiyada doorashada kadib markii ‘lagu soo...
Madasha Xisbiyada Qaran oo ka hor-timid guddiyada doorashada kadib markii ‘lagu soo daray’ xubno…
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa qoraal ay goor dhow soo saartay aad ugu cambaareysay hanaanka loo soo xulay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaalka.
Qoraalka Madasha oo ka kooban shan qodob ayaa lagu sheegay in guddiyada la soo magacaabay ay ku jiraan xubno ka tirsan hey’adda Nabad sugidda Qaranka iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya.
Madashu waxay qoraalkan ku cadeysay in arrinkaasi uu baalmarsanyahay shuruucda dalka u yaalla, heshiiskii doorahada iyo xeerka baarlamaanka.
“Taasi waxay dhaawaceysaa kalsoonida lagu qabi karo, hanaan doorasho oo xor iyo xalaal ah inay dalka ka dhacdo,” aya lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay Madasha Xisbiyada Qaran.
Sidoo kale Madasha ayaa sheegtay inay cadeyneyso in xukuumadda federaalka aysan wax sharciyad ah u laheyn inay soo magacaawdo xubnaha gobollada waqooyi ku metelaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka heer federaalka.
“Taasi waxay gef ku tahay nidaamka metelaadda dalka, isu-dheeli-tirnaanta iyo madax-banaanida guddiyada doorshada” ayaa lagu yiri qoraalka.
Madasha Xisbiyada ayaa talo ahaan u soo jeedisay in hanaankii doorashadii 2016-kii loo maro soo doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee Somaliland, isla markaana howshaas loo madax-baneeyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi ‘maadaama uu ka mid yahay hoggaanka ugu sareeya dalka, kana soo jeeda’ gobollada waqooyi.
“Madashu waxay ugu baaqeysaa madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha inay ka waantoobaan, kana fogaadaan, tallaabooyinka dhaawacaya hufnaanta doorashada iyo hanaankii doorasho ee lagu heshiiyey” ayaa lagu yiri qoraalkan.
Ugu dambeyntii Madashu waxay ku shaacisay qoraalkan inay ka sii afeefaneyso in wax kasta oo keeni kara muran iyo isqabsi shaki geliya madax-banaanida guddiyada iyo natiijada doorashooyinka goleyaasha baarlamaanka federaalka ay qaadi doonaan madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha.
Previous articleXog: Maamulka G/Banaadir oo arday badan iskuullada ugu eryey sabab yaab leh
Next articleKulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socdo Safiirka Qadar iyo Ugaaska Beesha Xawaadle
Militariga Ethiopia oo si rasmi ah ugu dhowaaqay dagaalka Tigray iyo...
Militariga Ethiopia ayaa goordhow iclaamiyey inuu si rasmi ah u billowday dagaalka ay kula jiraan xisbiga maamula gobolka Tigray, xilli dagaalka uu galay maalintii...
Taiwan oo saraakiil sar-sare u soo direysa Somaliland iyo qorshe cusub...
Kulan xasaasi ah oo Muqdisho uga socdo Safiirka Qadar iyo Ugaaska...